R/wasaare Khayre oo Booqday Askar kusoo dhaawacmay Difaaca Dalka iyo Dadka Soomaaliyeed | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Feb 20, 2020 - 6 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa Cisbitaalka xoogga ku booqday askar ka tirsan xoogga dalka oo ku dhaawacmay deegaanka Ceel-saliini ee gobalka Shabeellada Hoose, iyaga oo argagaxisada ka difaacaya dhiiga iyo hantida ummadda Soomaaliyeed.
Dowladda Soomaaliya ayaa ciidamada qalabka sida u diyaariysay qorshe daryeel caafimaad oo dhammaystiran, waxaana booqashada Ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre ay qeyb ka tahay dadaallada lagula soconayo xaaladda caafimaad ee dhaawacyada laguna dhiirri gelinayo ciidamada qaranka.
Hadii madaxda jubaland passaporadii diblu maasi lagala noqday. Maxaa kuwa pudlana loogala noqon waayay masa kuwaas laguma dhoco?
Ninkii iga aragti bedelan ma dhoofi karo ayaa soo socoto.
Weligeey ma arkin kuwa ka talo xun.
4 sano oo dib loo laabtay iga dheh.
Maalinn hore warbixin Pentagon soo qodhay waxay ku sheegeen in maleeshiyada ku magacaaban ciidanka qaranka ay shabaab u yihiin hilib bisil.
Xaqiiqda qoraalkaas Shalay dagaalkii dhacay sida cagta loo mariyey maleeshiyada ciidanka qaranka ku magacaaban ayaad ka garanaysaan.
Waxaanan saaka arkayey gawaadhi badan oo ay dagaalkaas ku qabsadeen shabaabku oo ay soo bandhigeen.Dhimashada iyo dhaawac badan ayaa koley halkaa ka dhashay lagana qariyey bulshada soomaaliyeed iyo caruurtaa dadkii dhalay.
Dhaawacan inta igu sawir loo soo bandhigayo bulshada xaqiiqda dagaalkaas ha loo sheego
BAL YAA Aqrina qoraalo Somalidiid Qabiiliiste; Garqaad, Xaange iyo Wiil Hiraab WAXAABA ugu roon Garqaad markuu fiyoowyahay. ≈©≈Garqaad MASABIDAAD badane, haddaad rabto inaan lagu naqdiyin MINANKIINA ku ekow. WBT
Aaragtida iyo Anarchy-yada isku mid maaha.
Somalida xagay ku arkeen waxa la yidhaa aragtida?
Axmed Madoobe waa Sbaaro loo dhigtay qaranka somaliyeed.
WAA SAX LKN,WAXAA KASII FIICNAYD INUU LABA LABA BOQOL DOLAR U LAABO!!!.SI AY DHIIRIGALIN UGU NOQOTO.WHY?POLITICAL-kaba $MLYNS BAY KU BIXIYAANE.